Sina mpanamboatra takelaka fandriana vy amin'ny gorodona vy | Famoronana Bocheng
Tongasoa eto hitsidika anay hahafantatra bebe kokoa momba ny orinasa.
OEM / ODM misy:
Ny sary famantaranao amin'ny vokatra.
Vokatra namboarina mifanaraka amin'ny sary.
Izay hevitrao momba ny vokatra dia afaka manampy anao mamolavola sy manome sary.
Endri-javatra amin'ny takelaka fandriana vy atsipitsika
● Ny fitaovana dia hery avo lenta, matevina ary matevina vita amin'ny kofehy matevina azo alaina ao amin'ny Kilasy GG-20, GG-25 na GG-30 izay voafidy hanamboatra ny takelaka vy vita amin'ny vy. Ny fitaovana hafa toy ny vy vy nodular na vy vy dia azo ampiasaina amin'ny fangatahana ihany koa;
● Ny firafitra misy tadiny sy tadiny dia manome ny hamafiny sy tanjaka amin'ny takelaka vy vita amin'ny vy. Ny firafitra mafy orina dia azo atolotra arakaraka ny angatahinao.
● Ny fahasarotana amin'ny vy goavam-be GG-25 vita amin'ny takelaka vita amin'ny t-slotted dia eo amin'ny HB170-240. Ny fahamendrehan'ny fisaka ambonin'ilay tampon'ireo takelaka vy vita amin'ny vy t-slotted dia azo alaina ho Kilasy I, II na III raha isaky ny DIN 876 Standarad. Ny fahamendrehana fisaka avo kokoa dia azo alaina amin'ny famonoana tanana amin'ny fangatahanao. Ny fahamendrehana ambonin'ireo takelaka vy vita amin'ny vy dia matetika Ra 3.2 μm azo tamin'ny alàlan'ny fananganana ny dingan'ny fikosoham-bary haingam-pandeha. Ny fahamendrehana ambany kokoa toy ny Ra 1.6 μm dia mety ho tratra ihany koa amin'ny alàlan'ny fikolokoloana araka ny fangatahanao;
● Ny fandeferana amin'ny sakan'ny T-slots amin'ny takelaka vy vita amin'ny vy dia H12 ary mety H7 na H8 ihany koa raha ilaina. Matetika T-slots mifanandrify amin'ny tari-dalana longitudinal no atolotra, fa koa T-slots mitongilana amin'ny lalana longitudinal dia azo aroso amin'ny fangatahana. Azonao atao ihany koa ny mangataka roa-lavitrisa sy hazo fijaliana t-slots amin'ireto takelaka vy vita amin'ny vy ireto;
● Fanamboarana cored sy ribbed, fitsaboana hafanana indroa manindry amin'ny maripana manodidina ny 600-700 ° C (vita voalohany ny fanaovana annealing aorian'ny fandefasana azy, ny fanindronana faha-2 dia vita aorian'ny fametahana masinina eo amin'ny lovia) ary ireto fahanterana manaraka ireto ny fitsaboana dia ampiharina amin'ireo takelaka vy vita amin'ny vy t-slotted ireo mba hanamaivanana ny adin-tsaina hatramin'ny farafaharatsiny, hiantohana ny fitoniana avo lenta ary hitazomana ny marina tsy misy fanodikodinana;
● Ny fampifangaroana ireo lalantsara amin'ny lafiny rehetra amin'ireo takelaka vy misy t-slotted dia azo omena amin'ny fangatahana hampiarahana ireo sombin-takelaka mankany amin'ny faritra lovia lehibe;
● Ampiasaina miaraka amin'ny lovia ny fonosana ary ny vatofantsika. Ny fihoaram-pefy mikitroka amin'ny lohataona dia azo omena rehefa angatahina;
Teo aloha: takelaka ambonin'ny granita
Manaraka: Latabatra welding 3D D28
Takelaka vy vita amin'ny vy
Takelaka fanaraha-maso ambonin'ny vy
Takelaka vy ambonin'ny vy
Tendrombohitra ambonin'ny vy
Alatsaho vy takelaka fitsapana vy
Takelaka fitsapana vy